ColorOS 6 Dadweynaha Beta ayaa u yimid Oppo R15 Telefoon | Androidsis
Qiyaastii laba toddobaad ka hor, Oppo ayaa bilaabay ColorOS 6 cusbooneysiinta beta dadweynaha ee loogu talagalay 'Oppo R15 Dream Mirror Edition'. Hadda, cusboonaysiinta ayaa diyaar u ah Oppo R15 nidaaminta
ColorOS 6 keenayaa interface cusub oo ay la socdaan Android 9 Pie ilaa Oppo R15. Isku xirnaanta adeegsadaha cusub wuxuu adeegsadaa wax badan oo cadaan ah sidoo kale wuxuu isku dayaa inuu yareeyo isticmaalka qoraalka si loo abuuro is dhexgal aan isku xirneyn. Oppo wuxuu sheegayaa in nidaamka cusub ee loogu talagalay loogu talagalay taleefannada shaashadda buuxa leh (baararka 18: 9 iyo wixii ka sarreeya).
Cusboonaysiinta sidoo kale waxay keeneysaa cusub Farta Shiinaha oo loo yaqaan 'OPPO Sans' iyo muuqaal qaboojiye barnaamij ku saleysan AI, kaas oo barto barnaamijyada badanaa loo isticmaalo iyo kuwa la joojiyo si loo sii daayo kheyraadka nidaamka. Marka arjiga aan la isticmaalin wax ka badan 20 daqiiqo, nidaamku horey ayuu u ogaan doonaa, marka loo eego qaabka isticmaalka ee la darsay, haddii uu yahay codsi badanaa loo isticmaalo si loo ogaado inay tahay inuu barafeeyo iyo in kale.
Sida loo rakibo ColorOS 6 qalabka loo yaqaan 'Oppo R15 Dream Mirror Edition'
ColorOS 6 beta ayaa yimid Oppo R15
Marka hore, waa inaad maskaxda ku haysaa taas shirkaddu waxay sii deyneysaa nooca tijaabada ah ee ColorOS 5 tartiib tartiib ah. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan weli haysan oo aadan soo dejisan karin oo aan rakibi karin. Si kastaba ha noqotee, waad heli doontaa sida ugu dhaqsaha badan: waxay noqon kartaa arrin saacado ama maalmo ah. Xaqiiqdu waxay tahay in lagu faafin doono adduunka.
Si aad u rakibto cusbooneysiinta, waa inaad si fudud u tagtaa barnaamijka cusbooneysiinta software-ka ee goobaha taleefanka. Halkaas ayaad ku xaqiijin kartaa inuu yimid iyo in kale oo aad ku rakibi karto. Waayo, waxaan kugula talineynaa sida caadiga ah: qalabku si fiican ha u dacweeyo kuna xirnaado shabakad Wi-Fi ah si looga fogaado isticmaalka xogta xad dhaafka ah. Ma jiraan warbixino weli sheegaya inta uu culeyskiisu yahay, laakiin waxay u badan tahay inay badan tahay. Marka waa muhiim inaad maskaxda ku hayso qodobadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo rakibo beta ColorOS 6 beta Oppo R15: cusboonaysiinta ayaa timid
Nokia 9 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Dubai dhamaadka bisha